သဘောကမြိသော 🍒 - Loey_B_Hyun - Wattpad
LOVE, BUT HURT (Season 3)_ The Last Begin_
60.8K 10.3K 21
This fiction is the season3of Fiction love but hurt. If you like that fiction and want to read more, you can keep read this. if not, please ignore this story.Thankalot 🙆🙆
Love, but Hurt (We meet again) Season 2( Complete)
455K 42.4K 39
အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဆုံတွေ့ဖြစ်ကြရင်ကျွန်တော့်နားကနေ ထွက်မပြေးနိုင်တော့အောင် ခင်ဗျားကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်တွယ်ထားမိလိမ့်မယ်။ အကယျ၍ ကြှနျတျောတို့ နောကျတဈကွိမျပွနျဆုံတှဖွေ့ဈကွရငျကြှနျတျော့နားကနေ ထှကျမပွေးနိုငျတော့အောငျ ခငျဗြားကို တငျးတငျးကပျြကပျြဖကျတှယျထားမိလိမျ့မယျ။ This is the Season2of Love, but...
Love, But Hurt (Completed) Season 1
1.8M 112K 70
အချစ်က ရယူခြင်းမှမဟုတ်တာပဲဆိုတဲ့စကားကိုပယ်ချတယ်။ မင်းဟာ ထာဝရ ကိုယ့်အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်။ အခဈြက ရယူခွငျးမှမဟုတျတာပဲဆိုတဲ့စကားကိုပယျခတြယျ။ မငျးဟာ ထာဝရ ကိုယျ့အတှကျပဲဖွဈရမယျ။
1.4M 185K 85
Name - The True Conqueror A love story of Southern King, Lin Mo and Northern Crowned Prince, Le Cheng You...~♥~ Type- BL, Fantasy, Romance, Own Creation Start Date- 10. November. 2019 End Date- 26. April. 2020 Both Zawgyi and Unicode Version
15.7K 4.9K 13
作者：泥巴啊哈 协力主笔：老何的口罩 编剧：风天天 协力：乱堂润润 小汤可依 编辑：魔法少女蔚 Credit all 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️ If possible please support to author အမွငျ့သုံးပတေောငျမပွညျ့သောမိနျးမစိုးလေး၊ စကားပွောတဲ့အခါသှားပွတျသားစှာပွောလရှေိ့သောအရှငျမငျးကွီး၊ဒါပမေဲ့သူသညျဧကရာဇျမငျးကောငျးဆိုတာသိခဲ့ပါသညျ။ Ji Xiang အမညျရှိသောမိနျးမစိုးသညျအရှငျမငျးကွီး၏အာရ...
2.3M 288K 200
YuYang ဆိုတဲ့ ဒုတိယနှစ် စီနီယာကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ဟာ ဒီနှစ်စာသင်နှစ်အစမှာ ကျောင်းသားသစ် လက်ခံရေးရာအတွက် Volunteer လုပ်ပေးရင်း တစ်ချိန်မှာ သူ့ဘဝအတွက် အရေးပါလာမယ့်သူကို ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ခဲ့တယ် အဲဒီကောင်လေးက မျက်နှာမှာ အရယ်အပြုံးမရှိတဲ့ အပြင် အရပ်ကလည်း မိုးထိုးနေတဲ့ တုံနှိဘာဝေ ဒီဇိုင်းနဲ့ နာမည်က LiHuan တဲ့ 👣 👣 👣...
S.C.I Special Crime Investigation Journal Of Mystery Myanmar translation
349K 44.3K 139
ထူးခြားတဲ့ ကွင်းဆက်လူသတ်မှုတွေကို မှုခင်းပညာနဲ့ စိတ်ပညာပေါင်းပြီး ဖြေရှင်းကြတဲ့ S C I အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ရဲ့ တရုတ်ဝတ္ထုကို eng ကနေ မြန်မာပြန်လေးပါ
100K 18.5K 31
🌿🌿穿越成反派要如何活命状态连载中(2)🌿🌿(to be or not to be-2)
101K 25.8K 29
主笔：王一 编剧：籍火文化-胡鲸 协力：王一漫画工作室 出品：书耽网 快看漫画 责编：木木 credit all🙇‍♀️🙇‍♀️
784K 63.6K 37
"သမီး မမွေးခင်ကတည်းက ထားခဲ့တဲ့ကတိကြောင့်လား...အဖေ...?'' ...... "ငါ့ချစ်သူကလွဲရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ မယူဘူး...'' .... "သခင်မလေး...ကျွန်...ကျွန်တော်က ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နော်...'' ..... "အစားထိုးဖို့ဆိုတာ မသင့်တော်ဘူး ထင်ပါတယ်....။'' Novel name-The Counterfeit bride Original author(s) - Zi Yue English translator - Hermit XD I d...
ဘုရင့်​ကိုယ်​လုပ်​​တော်​အား ခိုးယူခြင်း / ဘုရငျ့ကိုယျလုပျတျောအား ခိုးယူခွငျး
1.8M 155K 80
Chinese story written in English by Original Author -skies- English Name - Stealing The Emperor's Male Concubine မူရင်းစာ​ရေးသူ၏ ခွင့်​ပြုချက်​ဖြင့်​ ဘာသာပြန်​သည်​။ / မူရငျးစာရေးသူ၏ ခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ ဘာသာပွနျသညျ။ Burmese Translator : Honey Bee 🐝
Steal the male lead (MM Translation)
421K 48.7K 112
အဓိကဇာတ်ကောင်တွေက အမျိုးသားဇာတ်လိုက်တွေနဲ့ ပဲတွေ့ကြတာလား? ကောင်းပြီလေ၊ စာဖတ်သူတွေကတူခဲ့ကြတဲ့ အတွေးတွေကို သဘောတူတာ ငြင်းဆိုကြတာပေါ့။ နောက်ပိုင်းတော့၊ အဓိကဇာတ်ကောင်ကို ဖျက်ဆီးကြရအောင်။ ဒါကြောင့် အဓိကဇာတ်ကောင်ရဲ့ ရွှေခြေထောက်ကြီး ကိုအဝေးကို ယူထုတ်ကြရအောင်။ ဒီအကြောင်းတွေကြောင့် အဓိကအမျိုးသားဇာတ်လိုက် ကိုခိုးယူကြပါစို့။ 😊...
I've Led The Villain Astray, How Do I Fix It ? <<Myanmar Translation>>
209K 36.5K 45
Titles - I've Led The Villain Astray, How Do I Fix It ?/把反派养歪了肿么破 Author - Yan Ye / 湮叶 Total chapters - Completed, 475 chapters (Main story + Extra) ⚠⚠ This is the Burmese/ Myanmar translation ofaChinese Web-Novel with same name . This Story doesn't belong to me .I just Translate it into my mother-language so that...
245K 31.9K 67
မြေခွေးလေးနှင့် သူ၏ဝမ်ရယ် (FOD extra 3)
713K 77.1K 53
ဒါက Quickly Wear Face of Devil ရဲ့ Extra3ကို မြန်မာ ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ Extra ဆိုပေမယ့် Arc တစ်ခု သပ်သပ် လိုပါပဲ။ Original Author ကို credit ပေးပါတယ်။ cover photo လည်း credit ပါပဲနော်။
True Star Volume 1, (1-76) (MM)
24.7K 3K 25
original novel- True Star original author- Wan Mie Zhi Shang King of the silver screen, Fiennes Tang, passed away after years of fighting heart disease. He woke up to find himself in the body of an outdated idol male starlet. Since the heavens had given himanew opportunity, he decided to enjoy life to the fullest a...
QWFOD_ Arc_8,10,15,Extra_1,2,4 (MM Translation)
150K 14.1K 109
Arc _ 8, 10, 15 Extra_ 1,2,4 Total _6Arcs Title: Quickly Wear the Face of the Devil Author: Fengliu Shudai အကျဉ်းချုပ် - ထိပ်တန်းဟက်ကာတစ်ယောက်ကိုဘဝများစွာပြန်လည်မွေးဖွားဖို့ Lod God System ကရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကြီးအဆုံးသတ်သွားတော့ အရာအားလုံးက ပျက်စီးသွားပြီး ဝမ်းနည်းစရာတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး ကျိုးယွင်ရှန့် သည်ဗီ...
880K 121K 94
21.2K 1.8K 46
Lord of End of World (ကမ္ဘာပျက်ကပ်၏ အရှင်သခင်)
85.9K 24K 41
Author : Casanovanic Bookworm (FOD စာရေးသူ၏ နောက်ထပ်လက်ရာတစ်ခု) ဘာသာပြန်သူ - May King
ကံကွမ်မာစရော(On Hold Myanmar Translation)
356K 39K 39
Author(s):青端(Qing Duan) Title:Every Day The Protagonist Wants To Capture Me Original Title:主角每天都想攻略我 Genre:Action,Comedy,Fantasy,Romance,Xianxia,BL Eng Translator:Reika,BC Novels Link:https://www.novelupdates.com/series/every-day-the-protagonist-wants-to-capture-me/ I'm justatranslator and this story isn't belo...
FOD _ Cuckold Emperor _ Arc - 15 (သစ္စုာဖောက်ခံရတဲ့ ဧကရာဇ် )
399K 49.6K 51
Tittle: Quickly Wear the Face of the Devil Associated Names: FoD 快穿之打脸狂魔 Author: Fengliu Shudai 風流書呆 he top hacker was chosen by the Lord God to be reborn as hundreds of thousands of villains,Every world ended inadead end,Every end is tragic.Finally, he escaped the control of the Villain System, He d...
True Star _ Volume _ 1 Book _2 (MM)
54.8K 5.8K 37
True Star _Volume 1, Book _2( Chapter 76 _ End) MM original novel- True Star original author- Wan Mie Zhi Shang
True Star _ Volume -3 ( MM translation)
56.7K 7.6K 30
original novel- True Star original author- Wan Mie Zhi Shang Volume _ 1 https://my.w.tt/0VLPMBzaM0 Volume _2 https://my.w.tt/FiO6qMLaM0 https://www.rabbit-converter.org/Rabbit/ Because of my friend Shiroyuki, now i am ok to up my fiction with both myanmar font. Thanks Shiro.
QWFOD Extra2( myanmar traslation)
283K 33.4K 45
349K 27.5K 18
247K 21.6K 32
မွေး၍စားလိုက်ဒီဇာတ်လိုက်! ​[မှေး၍စားလိုကျဒီဇာတျလိုကျ] [Myanmar Translation]
17.5K 1.6K 5
ဇီနို ဆိုတဲ့ မိဘမဲ့လေးတစ်ယောက်ဟာ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုစွဲလန်းမိတဲ့အခါမှာတော့ .... ထိုဝတ္ထုထဲကဇာတ်လိုက်ကိုဘော်ဒါကောင်းလိုသဘောထားမိတဲ့အခါမှာတော့ .... သူကိုယ်တိုင်ထိုဝတ္ထုထဲရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ .... ဇီနို ဆိုတဲ့ မိဘမဲ့လေးတဈယောကျဟာ ဝတ်ထုတဈပုဒျကိုစှဲလနျးမိတဲ့အခါမှာတော့ .... ထိုဝတ်ထုထဲကဇာတျလိုကျကိုဘျောဒါကောငျးလိုသဘောထားမိတဲ့အ...
ယန်းယန်း မဟုတ်​​သော ယန်းယန်း
507K 56.7K 78
Love Story From Defulo (Series-3)
Painter of the Night (mm translation)
6.9M 272K 135
Just read if you are over 18